जोयालाई खुला पत्र
आईतवार, भाद्र ५, २०७३
प्रिय जोया !
धेरै सम्झना साथै छोराहरुमा आशिर्वाद ।
हुन त म साईनोमा तिम्रो कोही लाग्दिन । तिमी र ममा देशको भिन्नता छ भाषाको भिन्नता छ, लवाई खवाईको भिन्नता छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामीमा एउटा महान साईनो छ त्यो हो मानवीयता र नारीको साईनो।म जस्तै तिमी पनि नारी अनि कसैकी आमा कसैकी छोरी कसैकी चेली हौ । सबैभन्दा उच्च कुरो तिमी एक बहादुर आमा हौ ।
यहि कारण हो, जसले मलाई तिम्रा निम्ति दुई शब्द कोर्न बाध्य बनायो । यहि कारण हो तिम्रा हरेक पिडाहरुले मेरो मन छोयो ।
केही दिन अगाडि देखि सामाजिक संन्जालमा एउटा अपुस्ट खबर छापियो । कि एक फिलिपिनी महिला छोराछोरी लिएर रुँदै सडकमा अलपत्र परेकी छिन भनेर । बिस्तारै बिस्तारै दिन बित्दै जाँदा त्यो समचार भुसको आगो फैलिए सरि फैलिदै भाईरल भयो ।
तिमी तिम्रो देश फिलिपिन्सबाट दुबईमा ती नेपाली युवक जस्तै श्रम गर्न आएकी थियौ । अझ तिम्रो बारेमा लेखिएको थियो कि तिमी तीन चार बर्ष पहिले पैसा कमाउन गएको एक नेपाली युवकसँग प्रेममा परेउ, जो आफै कुलतमा फसेका थिए रे । तिमीले उसलाई सक्दो सहयोग ग¥यौ । यहाँसम्म कि तिमीले आफुले दिनरात नभनी जोडेको पैसाले तिम्रो प्रेमी भनाउँदो त्यो युवकलाई नेपाल ल्याउन सफल भएकि थियौ । ती युवकको प्रेममा परेकी तिमीलाई तिम्रो भनाई र समाचारमा आएका लिखित भनाई अनुसार त्यो प्रेमीले विभिन्न प्रताडना दिईरह्यो ।
कस्तो अनौठो लाग्ने हगि !
जसको प्रेममा परेर तिमिले आफ्नो देश छोड्यो, जिन्दगी नै धरासयी बनाएयौं उसैले तिमिलाई यतिका पिर ब्यथा आँसु र पीडा कसरी दिन सक्यो ? कि उ साच्चिकै मानव थियो ? या उसले तिमीलाई खेलौना ठान्यो ? कि तिमी बिदेशी केटी भएकोले जे जस्तो व्यबहार गरेपनि मिल्छ भन्ने सोच्यो उसले ? के यहि प्रेम थियो ? तिम्रो बलिदान र त्यागको बदलामा तिमीलाई उसले दिएको प्रेम यस्तै थियो ?
उफ्, आज यी शब्दहरु केलाउदा केलाउदै मेरो औंलाहरु कापेका छन् । मन आन्दोलित भएको छ । असहय पिडाको अनभुति भएको छ । किनकि तिम्रो प्रेम र त्यागलाई आज नाजायज प्रेमको एउटा स्वरुप बनाईएको छ । तिम्रो प्रेमको बलिदानलाई अबैधानिकताको ल्याप्छे लगाईएको छ । तिमीले बिताएका हरेक दिनहरुको हर्जाना तिराईएको छ । तिमीले पाएका पिडाहरुको तिरस्कारहरुको उल्टो तिम्रो देशले हर्जाना तिर्नु परेको छ र तिम्रो अस्मिता माथि दाग लगाईएको छ ।
यो कस्तो बिडम्बना हो यो कस्तो अन्याय हो ?
आजको अत्याधुनिक युगमा के सहि के गलत के अन्याय के न्याय सबैले छुट्याउन सक्ने भएका छौं जोया । हो तिमी बिदेसी केटी थियौ र तिम्रो पीडा पनि बिदेशीको पीडा जस्तो लाग्यो होला कसै कसैलाई । कसैलाई यि फिलिपिनीहरुलाई यस्तै व्यबहार गरिनु पर्छ किनकी यिनीहरु चरित्रहित हुन्छन । हो आमरुप मा यस्तै यस्तै मान्यता छ आम मान्छेहरुमा फिलिपिनी महिलाप्रति । तर म सत्य मान्दिन यस्ता आम गलत हल्लाहरुलाई ।
किनकी सबै फिलिपिनी केटीहरु चरित्रहिन हुँदैनन र कुनै पनि कुरा सबै नराम्रा र सबै नराम्रा हुँदै हुँदैनन । हरेक ठाउँमा हरेक देशमा हरेक समाजमा राम्रा कुराहरु सँगसँगै नराम्रा बिकृतिहरु नराम्रो परिवेशहरु हुन्छन् । अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरो तिमीले जसलाई प्रेम ग¥यो, आफ्नो प्राणभन्दा बढी प्रेम ग¥यो । नत्र त्येही नेपालीसँग नै बिहे गर्नु र उसैको लागि आफ्नो जिन्दगी नै दाउमा किन लगाउने थियौ र ? यति ठुलो संसारमा तिमी जस्ती सुन्दर रुपवान केटीले अरु पनि केटाहरु भेट्न सक्थ्यौ ।
तर यो प्रेमको लिला नै अपरम्पार छ । यहि प्रेमको लागि ठुला ठुला युद्धहरु भएका छन् । कैयौं प्रेमीहरु यही प्रेममा डुबेर आफुलाई विलिन बनाएका छन । कतिले आफ्नो ज्यान दिए कतिले प्रेमकै नाममा अरुको ज्यान लिए ।
त्येसैले जोया, कसैलाई प्रेम गरेकै कारण तिमिले परदेशी भुमिमा पाउनु दुःख पायौ । भाषा बोलिचालि रहनशहन उठाईन बेग्लै भएको बिरानो ठाउँमा तिमीले आफ्नो कल्कलाउँदो जोवन सिंचाई गर्दै आफुलाई जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफुलाई आमा बनायौ । भनिन्छ, एक साधारण ब्यक्तिले जस्तातस्ता परिस्थितिहरुको सामना गर्न सक्दैनन् तर एउटी आमाले हरेक परीक्षा र परिस्थितिको सामना गर्न सक्छन् ।
यसैले त तिमीले यतिका दुःख पायौ । तिम्रा दुई छोराहरुलाई छोड्न सकेनौं, उनीहरुको बाबुले निभाउन नसकेको कर्तब्य तिमीले सहर्ष स्वीकार गर्दै आफ्ना दुई संन्तान लिएर हाँसीखुसी आफ्नो देश फर्कन सक्यो । साँच्चीकै भन्नुपर्दा तिमीले तिम्रो प्रेमीबाट कानुन रुपमा बैधानिकता पाउन सक्छौ र तिम्रा छोराहरुले बाबुको नाममा सम्पुर्ण अधिकार पाउन सक्छन् । त्यो उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार हो । हो, हाम्रो कानुनले तिमीलाई र तिम्रा छोराहरुको जन्मसिद्ध अधिकार दिनै पर्छ । त्येसैले यसपालि तिमी गए पनि जुनैपनि दिन तिमी तिम्रो इच्छा भएको खण्डमा फर्केर आफ्नो गुमेको हक अधिकार प्राप्त गर्न सक्नेछौ । र तिमीलाई साथ दिने हामी जस्ता हजारौं नेपाली हुनेछौं ।
यो लेख तयारी गरिरहँदासम्म तिमी तिम्रो देश पुगिसकेकी छौ होला जोया, या तिमी यात्रा मै छौ कि त । तर तिम्रो पिडादायी कथाले हामी सम्पूर्ण नेपालीको मन पोलेको छ । छट्पटी भएको छ । किनकी देशले सिमाना छुट्याउछ, भाषा छुट्याउँछ तर मानावीय समवेदना र भावना छुट्याउन सक्दैन । किनकी मानवीय व्यबहार र मानवीय धर्मको कुनै सिमाना हुदैन जोया ।
त्येसैले तिमीलाई तिम्रो अवस्थाको लागि हामी सम्पुर्ण नेपालीको तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु । किनकी तिमीसँग जे–जे गलत कुराहरू बित्यो त्यो हाम्रो लागि समेत असह्य र गलत नै हो । कुनैपनि स्वाभिमानी नेपालीले आफ्नो देशमा आएका चाहे जुनै बिदेशी हुन चाहे जुनै सम्बन्ध जोडेर आएका हुन, तिनीहरु प्रति अन्याय र नराम्रो ब्यबहार गरेको सहदैनौं । अझ त्यसमाथि तिमी त बिदेशमा आपतमा परेको नेपालीलाई सहयोग गरेर हाम्रो देशमा भित्रिएकी थियौ ।
हो तिम्रै जस्तै पिडाले पिडित नारीहरु हाम्रा देशमा हजारौं छन् । तर ती स्वदेशी हुन । जसले आफ्नै देशमा घरेलु हिंसाको सिकार भएका छन् । हाम्रो नेपालीको पिडा तिमीलाई सुनाएर पनि के नै फाईदा छ र ? जे होस् तिमीले पनि मेरो देशको राम्रा र नराम्रा सबै पक्ष थाहा पाईसक्यौ । अब उप्रान्त तिमी सक्छौ नेपाल मै आएर आफ्नो अस्तित्व खोज सक्दैनौ आफ्नै देशमा केही गरेर सामाजिक काम गर भन्न चाहन्छु । त्यतीमै म आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठान्दछु ।
उही सधै तिम्रो भलो चाहने
नवलपरासी ६ गैरी
हाल : सिंगापुर प्रोजेक्ट, नेपाली हाउस
» जलवायू परिबर्तनको असर: रोशीमा जलचर जीव लोपोन्मूख
» संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल
» नैतिकता खडेरी रहेको मुलुकमा एउटा नयाँ अध्याय
» सरसफाइमा आएको जागरण
» बिनाशकारी भुकम्पको तितो स्मरण
» सन्दर्भ जनयुद्ध दिवसको
» लोकतन्त्र र यस्को अहंकारवादलाई वाम सुनामिले निमेट पार्नेछ
» फोहोर व्यवस्थापन संस्थाहरुका लागि वैकल्पिक उदाहरण
» अर्थभित्रको राजनीति
» प्रहरी प्रमुखको मुल्यांकन इतिहासले गर्नेछ
» दसैंको लडाइँ
» एउटा छोरो डाक्टर, अर्को छोरो इन्जिनियर, उनैलाई चाहियो राज्यकोषको तीन करोड
» पूर्वयुवराज पारसका स्वघोषित सहयोगी बाबुरामको पछि किन लागे ?
» जोयालाई खुला पत्र
» प्रचण्ड सरकार बनेपछि के हुन्छ ?
» मानव जातिका लागि वातावरणको महत्व
» पर्यटन-प्रबर्दनमा नेपाल वायुसेवा निगमको भूमिका
» पत्रकार महासंघ न्यूनतम पारिश्रमिकको मामिलामा किन चुप? सुहाउने कुरा हो यो ?
» आन्दोलनको धम्की भन्दा तयारी आवश्यक
» चीन साझा मित्र बन्नुपर्छ
» श्रमजीवी पत्रकारको नयाँ तलबमान लागू गर्दा मिडिया संचालकहरु काशी जालान् र ?
» कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व : नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी
» कांग्रेस महाधिवेशन : संस्थापनको तीन गुट, देउवालाई चिठ्ठा ?
» के नाकाबन्दी खुल्ने नै भयो ?